MYANMARTHWAY BLOG: July 2008
သင်ဖတ်ရှုနေသော စာအုပ်များက စကားလုံးအတော်များများ၏ အဓိပ္ပါယ်ကို ပြည့်စုံအောင် ဖွင့်ပြနိုင်သည် မဟုတ်ပါ။ သင်၏ ဘ၀အတွေ့အကြုံကသာ ထိုထိုသော စကားလုံးတို့၏ အဓိပ္ပါယ်ကိုလည်းကောင်း၊ ပရိယာယ်အမျိုးမျိုးကိုလည်းကောင်း၊ အခြေအနေလိုက်၍ အရေးပါမှုကိုလည်းကောင်း၊ ခံစား၊ နားလည် သိရှိလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။ ယင်းစကားလုံးတို့အနက် အချို့မှာ ခိုးယူခြင်း၊ စိုက်ပျိုးခြင်း၊ ၀ယ်ယူခြင်း၊ ငြိမ်းချမ်းခြင်းနှင့် တာဝန်ကျေပွန်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်မူ သူတစ်ပါးပစ္စည်းကို ထိုသူမသိအောင် ယူငင်သုံးဆောင်ခြင်းသည်ပင် ခိုးယူခြင်း မည်ပါ၏။ သို့သော် အချိန်ကို မတရား ယူနေခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ မသိနားမလည်သူတို့အပေါ် အမြတ်ထုတ်နေခြင်းသည်လည်းကောင်း ခိုးယူခြင်းဖြစ်သည်ဟု မထင်မှတ်တတ်ကြပါ။ လောကတွင် တာဝန်မကျေပွန်သူကို အပြစ်ပေးရကောင်းမှန်း သိသော်လည်း တာဝန်ကျေပွန်သူကိုမူ ဆုပေးရမှန်း မသိမမူတတ်သူ အများရှိပါသည်။ သူတို့ကို ပေးထားသည့် ပုံမှန်လစာရိက္ခာသည်ပင် ယင်းတာဝန်ကျေပွန်မှုအတွက် ဖြစ်သည်ဟုသာ ဆိုစမှတ် ပြုပါသည်။
လယ်သမားသည် စပါးပျိုးသူ ဖြစ်သည်။ မိဘတို့သည် သားသမီးပျိုးသူ ဖြစ်သည်။ ဆရာသမားတို့သည် တပည့်များကို ပျိုးသူဖြစ်သည်။ စိုက်ပျိုးခြင်းဟူသော စကားလုံးကို လယ်ယာကွင်းပြင်၊ သစ်ပင်ပန်းမန် တို့နှင့်သာ တွဲ၍ သိတတ်ကြသည်။ သားသမီးနှင့်မိဘ၊ ဆရာနှင့် တပည့်တို့အကြား ပျိုးထောင်မှုကို လည်းကောင်း၊ တတ်သိပညာရှင်နှင့် နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တို့၏ ယဉ်ကျေးမှုပျိုးထောင်မှုကိုလည်းကောင်း၊ လူတော်တော်များများက သတိမမူမိတတ်ကြပေ။ ယင်းတို့ကို သိနားလည်ဖို့အတွက် သာမန်မျက်စိထက် သာသော အမြင်သစ်မျက်စိ လိုအပ်ပေသည်။
ကိုယ်ခန္ဓာနှလုံးသားဝိညာဉ်နှင့် စိတ်ဓာတ်တို့၏ အရေးပါပုံကို သတိပြုပါ။ ကိုယ်ခန္ဓာသည် အာရုံအသီးသီး ၌ မွေ့လျော်ကျက်စားတတ်၏။ အာရုံခံခြင်း၊ အာရုံသိခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေ၏။ နှလုံးသားဝိညာဉ်ကမူ အပြုအမူတို့ကို နှိုးဆွဖြစ်ပေါ်စေသည်။ စိတ်ဓာတ်က မူဝါဒချမှတ်၍ လမ်းညွှန်မှုပေးသည်။ မည်သို့ပင် ဖြစ်စေ၊ အာရုံခံစားမှုများသည် လယ်ကွင်းတွင် မြက်စားနေသော နွားသိုးကြီး၌လည်း ရှိသည်။ တောထဲက ကျားသတ္တ၀ါ၌လည်း ရှိသည်။ လူသားတွင် အညံ့ဆုံးဖြစ်သည့် နပုန်းပဏ္ဍုက်တို့၌လည်း ရှိသည်။ ရောမမြို့ကြီး မီးလောင်နေစဉ် တယောထိုးမပျက်ဟု နာမည်ဆိုးဖြင့် ကျော်ကြားသော နီရိုဘုရင်တွင်လည်း ရှိပေသည်။ အာရုံခံစားမှုတို့က နှလုံးသားဝိညာဉ်ကို နိုးကြွစေကာ အပြုအမူတို့ ဖြစ်ပေါ်စေရန် လှုံ့ဆော်မှု ပေးသည့်သဘော ရှိပေသည်။
ကိုးကွယ်အားထားစရာ ဘုရားမရှိဟု ဆိုသူတို့သည်လည်းကောင်း၊ မိမိတို့မှီတင်းနေထိုင်ရာ တိုင်းပြည်နှင့် မဟာပထ၀ီမြေကြီးအပေါ်ကိုပင် သစ္စာစောင့်သိမှု မရှိသူတို့သည်လည်းကောင်း၊ မကောင်းမှု အ၀၀ကို ကျူးလွန်သောကြောင့် သံတိုင်နောက်ကွယ်တွင် ပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရသူတို့သည်လည်းကောင်း၊ သူတို့၏ အပြုအမူကို လမ်းညွှန်ပေးသည့် စိတ်ဆိုသောအရာ ရှိပေသည်။ ယင်းစိတ်က သူတို့နှင့် လိုက်ဖက်သည့် အပြုအမူတို့ ဖြစ်ပေါ်စေရန် လမ်းညွှန်မှုပေးခြင်း ဖြစ်ပေသည်။ အချုပ်ဆိုရသော် လူဆိုးတစ်ယောက်၏ စိတ်က အကျဉ်းထောင်သို့ ဦးတည်သော အပြုအမူဖြစ်ပေါ်စေရန်လည်းကောင်း၊ လူကောင်းတစ်ယောက်၏ စိတ်က ကျောင်းသင်ခန်းသို့ ရှေးရှုသော အပြုအမူဖြစ်ပေါ်စေရန် လည်းကောင်း၊ တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ပေးတတ်ပေသည်။
သတ္တ၀ါအားလုံးသည် ပုံသဏ္ဍန်အားဖြင့် ခြားနားသော်လည်း သဘာဝအားဖြင့် ဆင်တူသော ကာယ ရှိကြ၏။ ယင်းကာယတွင် သဘာဝအားဖြင့် တူညီသည့် အာရုံခံအင်္ဂါတို့ ရှိကြသည်။ ထို့ကြောင့် သတ္တ၀ါတို့သည် မြင်ကြသည်။ မံသစက္ခုဖြင့် မြင်သည့်အတွက် လက်တွေ့ရင်ဆိုင်နေရသော ဘေးအန္တရာယ်တို့မှ ရှောင်ရှားနိုင်ကြသည်။ မိမိတို့ အလိုရှိရာကို ရှာဖွေဖမ်းယူနိုင်ကြ၏။ လူသားတို့တွင်ကား အခြားသတ္တ၀ါတို့နှင့် ဇီဝကမ္မ တည်ဆောက်ပုံချင်း ဆင်တူသော်ငြားလည်း ပို၍ အဆင့်မြင့်မားသည့် အာရုံခံမှု၊ အာရုံသိမှုတို့ ရှိပေသည်။
သတ္တ၀ါအားလုံးတွင် သာမန်အမြင်ဖြစ်သော မံသစက္ခု ရှိကြ၏။ လူသားတို့တွင်သာ ထူးခြားအဆင့်မြင့်သည့် ပညာစက္ခု၊ ပညာအမြင် ရှိပေသည်။ လူသားတွင်လည်း လူကောင်းတို့၌သာ ထက်မြက်သော ပညာမျက်စိရှိပေသည်။ ထိုမျက်စိက ကောင်းမှု၊ မကောင်းမှုတို့ကို ခွဲခြားသိစေသည်။ ထိုပညာမျက်စိကြောင့်ပင် လူကောင်းသည် ကောင်းသောအကြံအစည်ရှိသည်။ ကောင်းသောအပြုအမူ ရှိသည်။ ကောင်းသောစကားကိုသာ ပြောဆိုတတ်သည်။ ခြုံ၍ဆိုရသော် လူကောင်းဟူသည် အပြု၊ အကြံ၊ အပြောတို့တွင် ကောင်းသောအဆင့်၌ တည်နေသူများ ဖြစ်ကြပေသတည်း။
( ၂၀၀၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လထုတ် “Youth” မဂ္ဂဇင်း အတွဲ ၃၊ အမှတ် ၈ မှ ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြပါသည် )
Posted by ကိုဉာဏ် Posted Time 10:45 AM0Comment(s) Link This
ကရာတေး - karate
ကျွမ်းဘား - gymnastics
ကြက်တောင် - badminton
ခရာ - whistle
ခရစ်ကတ်ကစားနည်း - cricket
ချန်ပီယံ - champion
ခြင်းလုံးခတ်ပြိုင်ပွဲ - cane-ball
ဂိုးတိုင် - goal
ဂိုးဖမ်းသမား - goal-keeper
ဂေါက်သီး - golf
ဂျူဒို - judo
စံချိန် - record
စိန်ခေါ်သူ - contender
စစ်တုရင်ပြိုင်ပွဲ - chess
စက်ဘီးစီးပြိုင်ပွဲ - cycling
တာတိုပြေးပွဲ - sprint
တာလတ်ပြေးပွဲ - middle distance race
တာဝေးပြေးပွဲ - long distance race
တင်းနစ် - tennis
တန်းကျော်ပြေးပွဲ - hurdle race
နပန်းသမား - wrestler
နပန်းလုံးပြိုင်ပွဲ - wrestling
နည်းပြ - coach
ပင်ပေါင်၊ ကြက်တောင်များ - rocket
ပင်ပေါင် - table tennis
ပိုက်ကွန် - net
ပိုက်ကျော်ခြင်း - over-the-net-cane-ball
ပြိုင်ပွဲ - match
ပြေးခုန်ပစ်ပြိုင်ပွဲ - the track and field event
ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်း - penalty
ဘက်တန် - rocket
ဘောလီဘော - volley ball
ဘတ်စကတ်ဘော - basket ball
ဘောလီဘောကစားကွင်း - court
ဘောလုံးပွဲ - soccer
ဘောလုံး/လက်ဝှေ့ ဒိုင်လူကြီး - referee
ဘောလုံးပစ်သူ - bowler
ဘိုးလင်းပစ်ကစားနည်း - bowling
မာရသွန်အပြေးပြိုင်ပွဲ - marathon
၈ မိုင် မာရသွန်ပြေးပွဲ - micro-marathon
၁၃ မိုင်ပြေး မာရသွန် - mini-marathon
မြင်းစီးပြိုင်ပွဲ - horse racing
ယှဉ်ပြိုင်ဘက် - rival
ရေကူးပြိုင်ပွဲ - swimming gala
(ရိုင်ဖယ်)သေနတ်ပစ်ပြိုင်ပွဲ - rifle shooting
လေးမြားပစ်ပြိုင်ပွဲ - archery
လက်မှတ်ပေါက် - wicket
လက်ဝှေ့ - boxing, bout
လက်ဝှေ့ထိုးသမား - boxer
လက်ဝှေ့ကြိုးဝိုင်း - boxing ring
လက်ဝှေ့ထိုးလက်အိတ် - boxing glove
လက်ဆင့်ကမ်းပြေးပွဲ - relays
လှံတံပစ် - javelin
လှေလှော်ပြိုင်ပွဲ - yacht race
လမ်းလျှောက်ပြိုင်ပွဲ - walking
၀ါးလုံးထောက်ခုန် - pole vault
၀ါတာပိုလို - water polo
သံပြားဝိုင်းပစ် - discus
သံလုံးပစ် - shot put
ဟော်ကီ - hockey
အားကစားပွဲကြည့်စင် - pavilion
အားကစားကွင်း - stadium
အားကစားဒိုင်လူကြီး - umpire
အားကစားသမား - athlete
အားကစားပွဲစဉ်များ - tournaments
အားကစားအဖွဲ့ - team
အားကစားလေ့ကျင့်ရုံ - gymnasium
အားကစားကွင်း - ground, pitch, stadium
အားကစားအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် - team captain
အထူးတန်းပွဲကြည့်စင် - grand stand
အလျားခုန် - long jump
အမြင့်ခုန် - high jump
အလေးမ - weight lifting
Posted by ကိုဉာဏ် Posted Time 7:50 PM0Comment(s) Link This
တကယ်လုပ်အဟုတ်ဖြစ်သည် - ကောင်းသန့်
လောကတွင် မဖြစ်နိုင်တာမရှိ။ မဖြစ်သေးတာပဲရှိသည်။ လူတို့သည် ကိုယ်လိုချင်တာ၊ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကို တကယ်လုပ် အဟုတ်ဖြစ်ပါသည်။ တကယ်လုပ် အဟုတ်ဖြစ်ရန်အတွက် အချက်(၄)ချက်နှင့် ပြည့်စုံရန်တော့ လိုသည်။
လူတွင် မွေးရာပါ စွမ်းရည်သတ္တိထူးတွေ ရှိ၏။ ထိုစွမ်းရည်ကို လူတို့သည် သာမန်အချိန်တွင် အပြည့်အ၀ အသုံးမချပေ။ ဘေးအန္တရာယ်နှင့် ကြုံသည့်အချိန်၊ အခက်အခဲ၊ အကျပ်အတည်းနှင့် ရင်ဆိုင်နေရချိန်မျိုးတွင် ထိုစွမ်းရည်ထူးတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်၏။ စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြသောအချိန်မျိုးတွင် ထိုစွမ်းရည်သတ္တိထူးကြောင့် မဖြစ်နိုင်တာတွေ ဖြစ်တတ်ကြကုန်၏။
မိမိဖြစ်ချင်၊ လုပ်ချင်သောကိစ္စတို့ကို ပြင်းပြသော စိတ်ဆန္ဒရှိရုံနှင့်မပြီး၊ မဖြစ်မနေလုပ်မည်ဟူသော ခိုင်မာသော ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ရန် လိုသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာလျှင် နောက်ဆုံးတွင် လိုချင်တာ ရတတ်စမြဲ ဖြစ်သည်။
ပြင်းပြသော စိတ်ဆန္ဒ၊ ခိုင်မာသောဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အတူ ဇွဲ၊ လုံ့လ၊ ၀ီရိယ ရှိရန်လည်း လိုသည်။ ပြင်းပြသော အလိုဆန္ဒရှိနေသောအခါ ဇွဲ၊ လုံ့လ၊ ၀ီရိယတို့သည်လည်း မဖြစ်မနေ ရှိနေရတော့၏။
ဘာပဲလုပ်လုပ် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိမှသာ အောင်မြင်နိုင်သည်။ မိမိကိုယ်မိမိ ယုံကြည်ခြင်းသည် ကိစ္စတစ်ခုကို ၅၀% ပြီးမြောက်စေနိုင်သည်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုမရှိလျှင် ဘာပဲလုပ်လုပ် အလွဲလွဲ အချော်ချော် ဖြစ်တတ်၏။ ထို့ကြောင့် အောင်မြင်ရန်အတွက် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိရန် လိုအပ်သည်။
အထက်ပါ အချက်လေးချက်နှင့် ပြည့်စုံလျှင် လောက၌ မဖြစ်နိုင်တာ မရှိပေ။ မဖြစ်သေးတာပဲ ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် တကယ်ဖြစ်ချင်လျှင် တကယ်လုပ်ပါ။ ဤအချက်လေးချက်နှင့်ညီလျှင် မဟုတ်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
( ဆရာကောင်းသန့် ၏ စေတနာစကား စာအုပ်မှ ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြပါသည် )
Posted by ကိုဉာဏ် Posted Time 7:46 PM0Comment(s) Link This
အက္ကောစ္ဆိ မံ အ၀ဓိ မံ၊ အဇိနိ မံ အဟာသိ မေ။
ငါ့ကို သူ ချဖူးတယ်၊
ငါ့ကို သူ မတရား
Posted by ကိုဉာဏ် Posted Time 7:39 PM0Comment(s) Link This
လေ့ကျင့်ခန်းက မင်းတို့ရဲ့ နှလုံးနဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာအတွက် အကျိုးရှိစေတယ်။ တကယ်လို့ မင်းတို့ လေ့ကျင့်ခန်း အစီအစဉ်တစ်ခုအတိုင်း ပုံမှန်လိုက်နာလေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင် အကျိုးကျေးဇူးတွေ မှတ်မှတ်ရရ ဖြစ်ထွန်း လာတာ တွေ့ရလိမ့်မယ်။
မင်းတို့ရဲ့စိတ်တွေ ပိုပြီး ကြည်လင်လာမယ်။ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှု ပိုပြီး ထက်မြက်လာမယ်။ မင်းတို့ရဲ့ ဦးနှောက်ထဲကို အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ပိုဝင်ပြီး မင်းတုိ့ပိုပြီး ထက်မြက်သန်စွမ်းလာလိမ့်မယ်။
နေလို့ထိုင်လို့ ပိုကောင်းပြီး လန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ့ ပိုကြည့်ကောင်းလာမယ်။ လူများစုဟာ ကျန်းမာ သန်စွမ်းပုံပေါက်တဲ့ လူတွေနဲ့သာ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံချင်ကြတယ်ဆိုတာ မင်းတို့ တွေ့လာလိမ့်မယ်။ လူများစုဟာ ကျန်းမာရေးချို့တဲ့ပုံပေါက်နေတဲ့ လူတွေနဲ့တွေ့ရင် သူတို့အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီး စိတ်မသက်မသာ ဖြစ်တတ်ကြတယ်။
မင်းတို့ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာ ပိုပြီး သန်စွမ်းလာတော့ ဖျားနာမှုကို မြန်မြန်တိုက်ဖျက်နိုင်တာပေါ့။ ပြီးတော့ စားကောင်း၊ သောက်ကောင်း ဖြစ်လာမယ်။
မင်းတို့ အသက်ရှည်ရှည်နေသင့်တယ်။ ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ ပုံမှန်အားဖြင့် သူ့ရဲ့ ခေတ်ပြိုင်အပေါင်းအသင်း အများအပြားထက် ပိုပြီး အသက်ရှည်တတ်ပါတယ်။ မင်းတို့အနေနဲ့ မင်းတို့ရဲ့ မြေးတွေ မြစ်တွေနဲ့ ဆော့ကစားရတဲ့ ပျော်ရွှင်မှုမျိုးကို ခံစားချင်လိမ့်မယ်လို့ ဖေဖေယုံကြည်တာပေါ့။
မင်းတို့ အောင်မြင်မှုကို ပျော်ရွှင်ခံစားကြလိမ့်မယ်။ အောင်မြင်မှုဆိုတာ အဲဒီအောင်မြင်မှုကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ခံစားနိုင်လောက်အောင် ကျန်းမာရေးကောင်းမှ ကောင်းတာကွယ့်။ လူအတော်များများဟာ သူတို့ရဲ့ စီးပွားရေးအောင်မြင်မှုတွေကို ဆေးကုစရိတ်အတွက် သုံးစွဲပစ်ကြရတယ်လေ။
မနက်ပိုင်း၊ ဒါမှမဟုတ် ညနေပိုင်း ဒါမှမဟုတ် အိမ်က အပြေးလေ့ကျင့်စက်ပေါ်မှာပဲ ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန် အပြေးလေ့ကျင့်ပါ။ လက်ထောက်မှောက် လေ့ကျင့်ခန်းကို အနည်းဆုံး အကြိမ် ၂၀ နေ့စဉ် ပြုလုပ်ပါ။ လူသားမျိုးနွယ်အတွက် အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းကတော့ ရေကူးခြင်းပဲ။ ရေထုက မင်းတို့ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာကို နှိပ်နယ်ပေးတယ်လေ။
လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ဘဲ နေ့တစ်နေ့ကို ဘယ်တော့မှ မ၀င်ပါနဲ့။
တစ်နေ့တစ်ရက်တိုင်းက အဆိုးနဲ့အကောင်းဖြစ်ရပ်တွေကို ခေါ်ဆောင်လာမှာဆိုတော့ မင်းတို့ပိုပြီး ကောင်းကောင်းအသက်ရှူစားသောက်၊ တွေးတော၊ စကားပြောပြီး စိတ်ကြည်ကြည်လင်လင်နဲ့ အဲဒီ ပြဿနာတွေကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်အောင် လေ့ကျင့်ခန်းကို မြူးပျော်စွာလုပ်ပါ။ နှစ်ပေါင်းများစွာ မပျက်မကွက် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လာတဲ့အခါ အစစအရာရာ အလိုအလျောက် အဆင်ပြေလာလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် နေသာသာ၊ မိုးရွာရွာ၊ ပျော်ချင်ပျော်၊ ၀မ်းနည်းချင်နည်း နေ့စဉ်နေ့တိုင်း မပျက်မကွက် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။
Posted by ကိုဉာဏ် Posted Time 7:36 PM0Comment(s) Link This
မနောပုဗ္ဗင်္ဂမာ ဓမ္မာ၊ မနောသေဋ္ဌာ မနောမယာ။
မနသာ စေ ပဒုဋ္ဌေန၊ သာသတိ ၀ါ ကရောတိ ၀ါ။
ပြုမယ်၊ ပြောမယ်၊ ကြံစည်မယ်ဆိုရင်
Posted by ကိုဉာဏ် Posted Time 11:51 AM0Comment(s) Link This
“မြန်မာဟာ မြန်မာလိုကောင်းအောင်လုပ်ပြနိုင်စွမ်းရှိရမယ်ကွ။ ကိုယ်ညံ့တာကို ပေါက်တတ်ကရ စကားလုံးသုံး၊၊ ဆင်ခြေပေးပြီး တော်တဲ့လုပ်ရပ်ကိုလည်း လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင် အဲဒီလောကဟာ ဘယ်တော့မှ တိုးတက်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံတော်က ဘယ်လောက်ပဲ ပံ့ပိုးပံ့ပိုး အင်ဂျင်မကောင်းမှတော့ တွန်းသလောက်ပဲပြေးတဲ့ကားလို ဖြစ်နေမှာပဲ”။
“မင်းဆီကို ဖောင်းနေတဲ့ဝမ်းထဲက လေတွေ လျှော့ဖို့လာတာ။ ငါပြောစရာရှိတာတွေ ပြောဦးမယ်ကွာ။ ဒီမယ်၊ ခုနောက်ပိုင်း ကိုရီးယားရုပ်ရှင်အကြောင်းက အရေးလုပ်ပြီးပြောစရာ ဖြစ်လာလို့ ကိုရီးယားရုပ်ရှင်နဲ့ ပတ်သက်တာတွေ ငါမှတ်ထားတာ။ အာရှတိုက်သားအနေနဲ့ ဟောလီဝုဒ်ကို စိန်ခေါ်နိုင်တဲ့ ကိုရီးယားရုပ်ရှင် အတွက် ဂုဏ်ယူရမှာပေါ့။ ဒီမယ် ဒါငါ့ရဲ့ အင်တာနက်ပဲ။ လိုချင်တဲ့ သတင်းအချက်အလက် လိုချင်တဲ့ အချိန်ရအောင် မှတ်ထားတာတွေ ဖတ်ကြည့်”။
တစ်ချိန်က ကိုရီးယားတို့သည် အိုင်ဒီယာအတွက် အမေရိကန်တို့ကို အားကိုးခဲ့ရသည်။ သို့သော် ယခုမူ ထိုအခြေအနေသည် ပြောင်းပြန်သဘောမျိုး ဖြစ်လာနေပေပြီ။ ဟောလီဝုဒ်သည် ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ကား ဒါဇင်နှင့်ချီ၍ ပြန်လည်ရိုက်ကူးရန် ခွင့်ပြုချက်များ ရယူနေသည်ကို တွေ့မြင်ကြရသည်။
(အင်တာဗျူးဂျာနယ်၊ ၁၂ ရက် မေလ ၂၀၀၄)
၁၉၀၃ ခုနှစ်တွင် ဟောလီဝုဒ် ကမ္ဘာ့ရုပ်ရှင် စတင်ခဲ့သည်။ ၁၉၂၀ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်စတင်သည်။ ၁၉၂၃ ခုနှစ်တွင် ကိုရီးယားရုပ်ရှင် စတင်သည်။
(၁၉၅၅-၁၉၆၉) ကိုရီးယားရုပ်ရှင်။ ထိုနှစ်များကို (ရွှေရုပ်ရှင်ခေတ်)ဟု ခေါ်ကြသည်။ ၁၉၅၄ တွင် ရုပ်ရှင် (၈) ကားမှ ၁၉၅၉ တွင် ရုပ်ရှင်ကား (၁၀၀)ကားအထိ တိုးတက်လာသည်။
၁၉၂၆ ခုနှစ်ကာလ ကိုရီးယားသမ္မတ ပတ်ချုံဟီးခေတ်၌ ရုပ်ရှင်တိုးတက်ရန် ရုပ်ရှင်ဥပဒေသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီတိုင်း တစ်နှစ် (၁၅)ကား ရိုက်ရမည်ဟု ဆိုသည်။
၁၉၈၀ ကျမှ ကိုရီးယားရုပ်ရှင်စတင်တိုးတက်လာသည်။
ယနေ့ဟောလီဝုဒ်ကပါ ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ကို ငွေစိုက်ထုတ်ရန် (၂)ကား ငွေထုတ်ပေးခဲ့သည်။ (Kang Je Gay) ရိုက်သော (TAEGUKGI) ကားအတွက် ဒေါ်လာသိန်း ၁၅၀။ ဒါရိုက်တာကြီး (Kang Woo Suk) ရိုက်သော (SILMEDO) ကားအတွက် ဒေါ်လာသိန်း ၁၀၀ ဖြစ်သည်။
(ရုပ်ရှင်တေးကဗျာမဂ္ဂဇင်း၊ မေလ ၂၀၀၄)
“တော်ပြီ၊ ဆက်မဖတ်နဲ့တော့။ ငါ ခုပြောချင်တာက တို့မြန်မာရုပ်ရှင်လောကက တစ်ဦးကပြောတယ်။ ကိုရီးယားကားတွေ လူကြိုက်များတာ စကတ်တိုဝတ်တာ၊ အရက်သောက်တာ၊ အင်္ကျီချက်ပေါ်ဝတ်တာ ရိုက်ပြခွင့်ရလို့ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး၊ ကြိုက်နေတဲ့ပရိသတ်ထဲက အသံကိုနားထောင်မိဟန် မတူဘူးကွာ။ ဘယ်သူကမှ စကတ်ကလေးဝတ်တာ ကြိုက်လိုက်တာ၊ ကောင်မလေး အရက်သောက်တာ ကြိုက်လိုက်တာလို့ မပြောပါဘူး။ ဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ် တင်ပြပုံ၊ အချိတ်အဆက်၊ သရုပ်ဆောင်အားလုံး အနုပညာမြောက်နေလို့ ကြိုက်တာကွ။ စကတ်ဝတ်လို့ အောင်မြင်မယ်ထင်ရင် မှားမှာပေါ့။ အမေရိကန် ရုပ်ရှင်က စကတ်ပါမ၀တ်ဘဲ ရိုက်ပြနေတာတွေ အများကြီးပါ။ အဲဒီ ဟောလီးဝုဒ်ကို ဘာလို့ ထိုးဖောက်နိုင် သလဲ။ ကိုရီးယားရုပ်ရှင်မှာ အမေရိကန်ရုပ်ရှင်လို အားရပါးရနမ်းပြတာကို စိမ်ပြေနပြေရိုက်ပြတာ မပါပါဘူး။ ဘယ့်နှယ်ကွာ မြန်မာရုပ်ရှင် နိုင်ငံတကာထိုးဖောက်နိုင်အောင် သူတို့လို အချစ်ခန်းရိုက်ပြလို့ ရမှာလားဆိုတာ အလွန်အောက်တန်းကျတဲ့ အတွေးအခေါ်ပဲ”။
“ဦးလေးရှုပ်၊ ပြောတာတော့ပြောနော်၊ ဒေါသတော့ မပါနဲ့။ တစ်ယောက်တည်း ရန်ဖြစ်နေတာ ကြည့်မကောင်းလို့ပါ”။
“ဖြစ်သင့်ရန် ဖြစ်ရမှာပဲ ငါ့လူ။ လူဆိုတာ သတ္တိရှိရမယ်။ အနုပညာသမားဆိုတာ သတ္တိပိုရှိရမယ်။ အဲဒီ သတ္တိက အမှန်တရားကို လက်ခံရဲတဲ့သတ္တိပဲ။ ညံ့နေတာကို သိပ်ညံ့တာပဲလို့ ပြောရဲသလို၊ ကောင်းနေတာကိုလည်း သိပ်ကောင်းတာပဲလို့ ပြောရဲရမယ်။ ကိုယ့်ထက်သာရင်လည်း “ကျွန်တော်တို့ထက် အများကြီးသာတယ်” ဆိုပြီး အသိအမှတ်ပြုရဲရမယ်။ ကျွန်တော်တို့က အဲဒီလို လုပ်ခွင့်မရလို့ပါဆိုတဲ့ မရေမရာဆင်ခြေမျိုးတော့ မပေးနဲ့။ မြန်မာက ကိုရီးယားလို လုပ်ပြဖို့ မလိုပါဘူး။ ဂျပန်လို သရုပ်ဆောင်ပြဖို့ မလိုပါဘူး။ မြန်မာက မြန်မာလိုပဲ လုပ်ပြရမှာပေါ့။ အကြောင်းအရာ အပြုအမူတွေကို ပြောတာပါ။ ငါ ခုလိုပြောနေတာ မြန်မာရုပ်ရှင်လောကသားများ ကိုယ့်အားနည်းချက်ကို ပထမရှာပြီးမှ တိုးတက်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာ စဉ်းစားစေချင်လို့ပါကွား။ နိုင်ငံခြားသရုပ်ဆောင်တွေလို လုပ်ပြလို့ရတာတွေ၊ ရိုက်ပြလို့ရတာတွေ အများကြီးပါပဲ။ တို့ မြန်မာရုပ်ရှင်လောကမှာ မကြီးသင့်တဲ့လောဘကြီးနေကြတာ အများကြီးပဲ။ အားလုံးတော့ မဟုတ်ပါဘူး“။
“မိတ်ကပ်လောဘကြီးတယ်ကွာ။ အမူအရာလောဘကြီးတယ်ကွာ။ ဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ်ကျတော့ လောဘမရှိဘူးကွာ။ ဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ် ခိုင်ခိုင်မခိုင်ခိုင် မင်းသားနဲ့ ကျားကန်ဖို့ ကြိုးစားတာ၊ ဇာတ်ညွှန်းအား ပျော့နေလည်း မင်းသမီးနဲ့ အလေးတင်ချင်တာ၊ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်တော့ ဒီနေ့ ရုပ်ရှင်လောကသား အတော်များများက “ဖောက်သည်” ထားပြီး အလုပ်လုပ်နေကြတာကွ။ ဒါရိုက်တာက သူအပ်နေကျ ၀တ္ထုရေးသူ၊ ဇာတ်ညွှန်းရေးသူဆီမှာ အပ်မယ်။ ရိုက်နေကျမင်းသား၊ မင်းသမီးနဲ့ ရိုက်မယ်။ ကြည့်နေကျ ပရိသတ်က ကြည့်လိမ့်မယ်ဆိုတာမျိုး။ ဒီအချိန်မှာ မြန်မာရုပ်ရှင်ဆိုတဲ့ စားသောက်ဆိုင်ဘေး ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲကလည်း ဆိုင်လေးလာဖွင့်ရော။ ဖောက်သည်တွေက စားကောင်းတဲ့ဆီ ပြောင်းကုန်ကြတော့တာကွ”။
“ကဲ မကျေနပ်တာတွေ အသာထား။ မြန်မာရုပ်ရှင် တိုးတက်စေချင်တယ်ဆိုရင် ဘာလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာ အကြံပေးပါဦး”။
“၀ပ်ရှော့လုပ်ကွာ။ စာတမ်းတွေဖတ်ကွာ။ ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲ ဘာကြောင့် လူကြိုက်များရသလဲ။ မြန်မာရုပ်ရှင်ဇာတ်အိမ်ရွှေရတုခေတ်နဲ့ စိန်ရတုခေတ် နှိုင်းယှဉ်ချက်၊ ဇာတ်ညွှန်းရဲ့ အရေးပါမှု၊ ဇာတ်ကွက်ရဲ့ ခွန်အား၊ ခန်းစဉ်အချိတ်အဆက်ဆိုတာ ရုပ်ရှင်ကားရဲ့ ပန္နက်ဆိုတာမျိုးတွေကွာ။ ခုဟာက တို့မြန်မာရုပ်ရှင်က ကွန်ပျူတာ ဘယ်လိုသုံးရမလဲ စိတ်စောနေတာနဲ့ ကျန်တာတွေ အကုန်ဖြစ်သလို လုပ်နေကြတယ် မှတ်ရတာပဲ။
ဒီနေ့အခန်းစဉ်ဆိုတာ ပီပီပြင်ပြင် အပင်ပန်းခံ မလုပ်ကြတော့ဘူး။ ဒီတော့ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး အချိတ်အဆက်၊ ဇာတ်ရှိန်အတက်အကျကို ကြိုပြီး တွက်လို့ရတော့မှာလဲ။ ဇာတ်ညွှန်းဆိုတာ အခန်းစဉ်က ကောင်းနေရင် အလိုလို ကြွတက်လာတာပါကွာ။ အခန်းတိုင်းအတွက် ဇာတ်ကွက်တွေကို အကောင်းဆုံး ထည့်ပေးဖို့ကို ထပ်စဉ်းစား။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်တာ အသေးစိတ်မကျသမျှ၊ မပီပြင်သမျှ ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်တာဟာ “ဖြစ်သလို”ဆိုတဲ့ ခေါင်းစီးအောက် ရောက်မှာပဲ။ ဒါက မြန်မာရုပ်ရှင်ကို ချစ်တဲ့ သတင်းထောက်အိုရဲ့ အမြင်ပေါ့ကွာ။ သူများကောင်းတာကို ဘာလို့ ကောင်းတယ်ဆိုတာသိမှ ကိုယ်ဘယ်လိုကောင်းအောင် လုပ်ရမလဲ။ ကိုယ့်အားနည်းချက်က ဘာတွေလဲဆိုတာ သိမှာပေါ့”။
“ဒီမှာ ကံချွန်၊ ကြည့်”
ဦးလေးရှုပ်က ပါးစပ်ဟပြပါတယ်ခင်ဗျာ။ အံတွေက တိုနေပါပြီ။
“ငါ့စေတနာတွေကို မစော်ကားပါနဲ့ကွာ။ တိုးတက်စေချင်တာ သက်သက်ပါ”။
(ဆရာကံချွန် ၏ “သတင်းထောက်ကြီး ဦးလူရှုပ်” စာအုပ်မှ ပြန်လည်ကူးယူ ဖော်ပြပါသည်)
Posted by ကိုဉာဏ် Posted Time 11:44 AM0Comment(s) Link This
အပြန်အလှန် ချီးကျူးခြင်း - မောင်ကောင်းထိုက်
ချာလီချာပလင်ရိုက်ကူးသော The gold rush ရုပ်ရှင်ကားကို အိုင်းစတိုင်း အလွန်သဘောကျသည်။ အဓိက ဇာတ်ကောင်၏စရိုက်ကို ပီပီပြင်ပြင်ဖော်ပြနိုင်သည့်အတွက် ဒါရိုက်တာကို အထူးချီးကျူးသည်။ သို့နှင့် ချာလီချာပလင်ထံ စာရေးသည်။
“မိတ်ဆွေရဲ့ The gold rush ဇာတ်ကားကို တစ်ကမ္ဘာလုံး နားလည်သဘောပေါက်ကြတယ်။ မိတ်ဆွေကြီး ထင်ရှားကျော်ကြားမှာ ဧကန်မလွဲဖြစ်ပါတယ်” ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
“ဆရာကြီးကို ကျွန်တော်ပိုပြီး ချီးကျူးချင်ပါတယ်။ ဆရာကြီးရဲ့ “ရီလေတစ်ဗီတီသီအိုရီ” ကို ဘယ်သူမှ နားမလည်ကြဘူး။ ဒီကြားထဲက ဆရာကြီး ထင်ရှားကျော်ကြားလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်” ဟူသတည်း။
အခက်ဆုံးအချိန် - မောင်ကောင်းထိုက်
သိပ္ပံကွန်ဖရင့်တစ်ခုတွင် “အိုင်းစတိုင်း” စာတမ်းဖတ်ကြားသည်။ ပြီးသောအခါ ၎င်းကိုဝိုင်းမေးကြသည်။
“ဒီနေ့ပွဲမှာ ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်အခိုက်အတန့်မှာဖြင့် အခက်ဆုံးပဲလို့ ဆရာကြီးအနေနဲ့ ခံစားမိပါသလဲ”
“အိုင်းစတိုင်း” အတည်ပေါက်နှင့် ပြန်ဖြေသည်။
“အခမ်းအနားမှူးက ကျုပ်ကို ပရိသတ်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပြီးတဲ့နောက် အိပ်ပျော်နေတဲ့ ပရိသတ်ကို ပြန်နှိုးရတာ အခက်ဆုံးပဲ”။
အစားရှောင်တဲ့ မတ်တွိမ်း - မောင်ကောင်းထိုက်
တစ်နေ့ မတ်တွိမ်း နေမကောင်းဖြစ်သည်။ ဆရာဝန်က အစားအသောက်ရှောင်ရမည်၊ တစ်နေ့ကို နွားနို့ တစ်ခွက်နှင့် မုန့်ခြောက် နှစ်ခုထက် ပိုမစားရဟု ပြောသည်။
“ခင်ဗျားရောဂါက ဒီထက်ပိုစားရင် အန္တရာယ်ရှိတယ်ဗျ”
“အင်းလေ၊ ဒီလိုဆိုတော့လဲ မတတ်နိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်ကို တံဆိပ်ခေါင်း တစ်လုံးသာပေးပါ”
တီထွင်သူ့တံခါး - မောင်ကောင်းထိုက်
လျှပ်စစ်မီးအပါအ၀င် တီထွင်မှုပေါင်း တစ်ထောင်ကျော်ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သူ အမေရိကန်ပညာရှင် “အက်ဒီဆင်” ၏ ခြံတံခါးကို အမြဲတမ်း ခက်ခက်ခဲခဲ ဖွင့်ရသဖြင့် မိတ်ဆွေများက ၀ိုင်းပြောကြသည်။
“အမျိုးမျိုး တီထွင်တတ်သူလို့လည်း ပြောသေးတယ်၊ ကိုယ့်ခြံတံခါးကို အလွယ်တကူ ဖွင့်နိုင်အောင် ဘာဖြစ်လို့ မလုပ်တာလဲ”
“ခြံတံခါးကို ကျွန်တော် အကောင်းဆုံးတီထွင်ပြီး လုပ်ထားတာပါဗျ”
“ဘာလဲ… ခင်ဗျား… ကျုပ်တို့ကို နောက်တာလား”
“မနောက်ပါဘူး၊ တံခါးကို အိမ်ကရေစုပ်စက်နဲ့ ဆက်ထားတာဗျ၊ ခင်ဗျားတို့ တံခါးကို တွန်းဖွင့်လိုက်တိုင်း ခေါင်မိုးပေါ်တင်ထားတဲ့ ရေတိုင်ကီဆီကို ရေလီတာသုံးဆယ် တင်ပြီးသား ဖြစ်သွားတယ်လေ”
ဒီအတိုင်းပဲ နေပါရစေ - မောင်ကောင်းထိုက်
ကိုယ့်ဘုရင်အကြောင်း စာအုပ်ရေးပါလားဟု “ဗော်လ်တိုင်းယား” အား ၀ိုင်းဝန်းတိုက်တွန်းကြရာ ၎င်းက ခပ်ဆတ်ဆတ်ပြန်ဖြေသည်။
“ဘယ်တော့မှ မရေးဘူး။ ဘုရင်ပေးတဲ့ ထောက်ပံ့ကြေးကို လက်လွတ်မခံနိုင်ဘူးဗျ”
( မောင်ကောင်းထိုက်-နှီးပဒေါ ၏ “သူတို့လည်း ရယ်စရာပြောတတ်သည်” စာအုပ်မှ ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြပါသည် )
Posted by ကိုဉာဏ် Posted Time 1:32 PM0Comment(s) Link This
ဒီကမ္ဘာလောကကြီးမှာ နှစ်သက်ပျော်မွေ့စွာ အလုပ်လုပ်ခြင်းထက် ပိုကောင်းတာ ဘာမှ မရှိဘူး။ တို့တစ်တွေ အနေနဲ့ အလုပ်လုပ်ခြင်းကို လှပတဲ့ အတွေ့အကြုံတစ်ခုအဖြစ် ဖန်တီးလို့ရတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အတော်ကြာကြာတုန်းက စင်ကာပူရေကူးကလပ်မှာ အမှုထမ်းနေတဲ့ စားပွဲထိုးမယ်တစ်ဦးဟာ ဘာဖြစ်လို့များ ငိုမဲ့မဲ့ မျက်နှာကြီးနဲ့ ဖြစ်နေပါလိမ့်လို့ ဖေဖေ အံ့သြတကြီးဖြစ်လေ့ရှိခဲ့တယ်။ ဒီသူငယ်မ ပြုံးတာရယ်တာကို ဖေဖေတစ်ခါမှ မတွေ့ခဲ့ဖူးဘူး။ အဲဒီနောက် မကြာခင်မှာပဲ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကောင်းလောက်တဲ့ ပြောင်းလဲမှုတစ်ရပ် ဖြစ်လာတယ်။ သူဟာ အချိုသာဆုံး အပြုံးလေးနဲ့ တည်ခင်း ဧည့်ခံလာတယ်။ အဲဒီလို ကောင်းမွန်ပြီး အပြုသဘောပါတဲ့ ပြောင်းလဲမှုမျိုးဖြစ်လာအောင် တစ်ခုခုတော့ ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရမယ်လေ။ နောက်မှ သိရတာက သူဟာ ယဉ်ကျေးဖွယ်ရာ နေထိုင်ဆက်ဆံရေး သင်တန်းတက်ခဲ့ပြီး လာရောက်စားသုံးသူတွေကို ဘယ်လို နှစ်သက်ပျော်မွေ့စွာ ဆက်ဆံဧည့်ခံရမယ် အကြောင်း လေ့လာသင်ယူခဲ့တယ်ဆိုပဲ။ သူပြုံးလိုက်တဲ့အခါ လူတွေကို ပျော်ရွင်ချမ်းမြေ့မှုပေးနိုင်တယ် ဆိုတာကို သူမသိခဲ့ဘူးလေ။ ခုတော့ သူတည်ခင်းဧည့်ခံတဲ့ အစားအစာက ပိုပြီးတော့တောင် အရသာ ရှိလာသဗျာ့။ သူဟာ သူ့အလုပ်ကို တကယ်ပဲ နှစ်သက်ပျော်မွေ့စွာလုပ်လာတယ်။ ပြီးတော့ အလုပ် လုပ်နေရတဲ့ အချိန်တိုင်းကိုလည်း နှစ်သက်မြတ်နိုးလာတယ်။ ဒီတော့ သူ့ကို ကြီးကြပ်ရေးမှူးအဖြစ် နေ့ချင်း ညချင်း ရာထူးတက်ပေးလိုက်တာကို ဘယ်သူမှ အံ့သြတကြီး ဖြစ်မနေတော့ဘူးပေါ့ကွယ်။
တို့များရဲ့ အလုပ်ခွင်ကို လှလှပပပြင်ဆင်လိုက်ရင် ပျော်မွေ့စရာကောင်းတဲ့ နေရာဌာနတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်မလား။ ဆေးရောင်လှလှကလေး သုတ်ထားမလား။ ပန်းမန်တွေနဲ့ မွမ်းမံမလား။
တို့တစ်တွေဟာ ပင်ကိုသဘာဝကိုက သပ်သပ်ရပ်ရပ်နေတတ်သူတွေလား။ ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်ခန်းတို့၊ ရုံးခန်းတို့မှာရှိတဲ့ စားပွဲပေါ်မှာ သန့်ရှင်းနေရမယ်။ မလိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေ မရှိရဘူး။
တို့များရဲ့ လက်ရေးလက်သားကကော။ တို့များရဲ့ လက်ရေးကို လူတွေ အဖတ်ရခက်နေသလား။ အဲဒီလို ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် သေသေသပ်သပ်ရေးဖို့ အားထုတ်ကြိုးပမ်းရတော့မယ်။ မင်းတို့ရဲ့ လက်ရေးလက်သားကို လူတွေ စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ ဖတ်ပါစေ။ ခုဆို ဖေဖေလည်း ကိုယ့်လက်ရေးကိုယ် ကောင်းသထက်ကောင်းအောင် ကြိုးစားပြုပြင်နေတယ်။
မင်းတို့ရဲ့ အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်ကော။ မင်းတုိ့ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ အသက်ဝင်စိုပြည်နေအောင် မင်းတုိ့က ရှေ့ဆောင်ရှေ့ရွက် ပြုကြရမယ်။ မနက်ပိုင်းဆိုရင် လူတိုင်းကို စတင်နှုတ်ဆက်သူဟာ မင်းတို့ ဖြစ်ပါစေ။ မင်းတို့ရဲ့အသံဟာ ကြင်နာမှုနဲ့ နွေးထွေးနေပါစေ။ ရုံးခန်းထဲမှာ အလင်းရောင်ဖြာဝေအောင် စတင်ထွန်းညှိပေးမယ့် မီးပွားကလေး ဖြစ်နေပါစေ။ တကယ်လို့ အလုပ်တွေပြီးပြတ်အောင် အချိန်ပို လုပ်ရမယ်ဆိုရင်လည်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လုပ်ပါ။ အဲဒီအတွက် ဆုလာဘ်ကို ခံစားကြရမှာပါ။ အဲဒီ ဆုလာဘ်ကတော့ ပျော်ရွှင်မှုရယ်၊ အများနဲ့ အဆင်ပြေမှုရယ်ပဲပေါ့။ မင်းတို့မှာ မိတ်ဆွေကောင်းတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေ အများကြီး ရလာလိမ့်မယ်။
ဘာပဲလုပ်လုပ်၊ ပထမတစ်ခါလုပ်ခဲ့တာထက် ပိုကောင်းအောင် ကြိုးစားလုပ်ပါ။ တို့တစ်တွေအတွက် စိန်ခေါ်မှုတွေ လိုအပ်တယ်လေ။ တို့တစ်တွေရဲ့ အတ္တစိတ်ကို မြှင့်တင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်။ ကိုယ်လက်လှမ်း မီနိုင်တဲ့ မြင့်မြင့်မားမားရည်မှန်းချက်တွေ ချမှတ်ပါ။ မင်းတို့ဟာ ထာဝစဉ်အောင်နိုင်သူတွေ ဖြစ်နေဖို့ လူဖြစ်လာကြတာ။ ရိုကျိုးနှိမ့်ချစွာ နေထိုင်ကျင့်ကြံပြီး ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန် ရလာတဲ့ အောင်မြင်ထမြောက်မှု တွေထဲမှာ အံ့မခန်းစရာ ပျော်ရွှင်မှုတွေရှိနေတယ် သားတို့ရေ။
မင်းတို့ရဲ့ အလုပ်ကို နှစ်သက်ပျော်မွေ့စွာလုပ်ပါ။ အရာရာတိုင်း…
မင်းတို့ရဲ့ အတွေးတွေ၊ မင်းတို့ရဲ့ အသံ၊ မင်းတို့ရဲ့ ရုံးခန်း၊ မင်းတို့ရဲ့ မော်တော်ကား၊ မင်းတို့ရဲ့ လက်ရေး၊ မင်းတို့ရဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး…. ကို အလှဆင်ပါ။ ပြီးတော့ အဲဒီလို ပြုမူကျင့်ကြံဖို့ တို့မှာ အချိန်အကန့်အသတ် ရှိနေတယ်ဆိုတာ သိနားလည်ထားပါ။
Posted by ကိုဉာဏ် Posted Time 1:30 PM0Comment(s) Link This
သဘောကျမိတဲ့ ကာတွန်းလေးတစ်ကွက်ပါ။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး လူတွေက အတော်လေးကို အလေးထားလာကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ အလေးမထားလို့လည်း မရတော့ပါဘူး။ လူတွေ ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့ နြူကလီးယားဆိုတာက ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ ရောဂါအမျိုးမျိုးက လူတွေကို အနီးကပ် ဒုက္ခပေးနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကင်ဆာတွေ၊ ခုခံအားကျဆင်းမှုရောဂါတွေ၊ ကူးစက်ရောဂါတွေ စသည်ဖြင့် နာမည်အမျိုးမျိုးနဲ့ ရောဂါတွေရဲ့ ရန်ကို ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေ နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ ရှောင်ရှား နေကြရပါတယ်။ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေကြတဲ့အတွက် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားဆိုတာကလည်း အသိသာ ရှိတာကိုး။ ဘယ်ကလာပြီး အချိန်ပေးနိုင်ပါ့မလဲ။ အိပ်ယာပေါ်မှာ ဗုံးဗုံးမလဲမချင်းတော့ ၀မ်းတစ်ထွာအတွက် လုပ်ကိုင်နေကြရဦးမှာပါပဲ။
ရောဂါတွေထဲမှ ဒီနေ့မှာ ပေါ်ပြူလာဖြစ်နေတဲ့ ရောဂါက အ၀လွန်ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ အစားအသောက်က မဆင်ခြင်နိုင်၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားကနည်း ဆိုတော့ အနောက်နိုင်ငံတွေအတွက် အ၀လွန်ရောဂါဟာ တကယ့်ကို ပြဿနာကြီးတစ်ရပ် ဖြစ်နေပါပြီ။
အောက်က ကာတွန်းလေးထဲမှာလည်း ကိုလက်စထရော တွေများနေလို့ စိတ်ပျက်နေတဲ့ လူတစ်ယောက် အကြောင်းကို ကာတွန်းရေးဆွဲသူက ဘယ်လိုများ စိတ်ကူးပြီး သရုပ်ဖော်ထားသလဲဆိုတာကို ကိုယ်တိုင်သာ ခံစားကြည့်ကြပါလို့....
Posted by ကိုဉာဏ် Posted Time 12:51 PM0Comment(s) Link This
Posted by ကိုဉာဏ် Posted Time 12:01 PM0Comment(s) Link This
စာတိုပေစကပေးတဲ့ အသိ နဲ့ သတိ
မနေ့က ဆုံးမစာပေါင်းချုပ်စာအုပ်ကို ဖွင့်ပြီးဖတ်လိုက်ပါတယ်။ အဲလေ- ဖတ်မယ်လို့ ပြင်လိုက်ပါတယ်။ စာအုပ်ပါ စာသားများကို မဖတ်ရခင် စာရွက်စုတ်ကလေးတစ်ရွက် ထွက်လာပါတယ်။ အို - အဖေ့ဆီက စာပါလား။ စာရွက်ထိပ်မှာ လူ့သဘာဝလို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားပါတယ်။
အောက်မှာ ရေးထားတာက ဒီလိုပါ။
ဒေါသနှင့်ယှဉ်လာလျှင် အပြစ်ပဲမြင်တတ်၏။ သို့သော် မကြောက်ရသူကိုသာ အပြစ်မြင် အပြစ်တင်တတ်၏။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကိုယ့်ကို ရက်စက်မည့်သူမဟုတ်သောကြောင့်။
ကျေးဇူးဟူသည် ဘာတစ်လုတ်မျှ မကျွေးဖူးသော်လည်း ရပ်ကွက်အတူနေ အိမ်နီးချင်းများပင်လျှင် ကျေးဇူးရှင်များ ဖြစ်ကြ၏။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကိုယ်တစ်အိမ်ချင်း လွင်ပြင်မှာနေ၍ မလုံခြုံသောကြောင့်ဖြစ်၏။ နှုတ်ဖြင့်၊ လက်ဖြင့် အာဟာရတို့ကို ကျွေးမွေးပြုစုမည့်သူများကိုကား ဆိုဖွယ်မရှိ။
ကိုယ်ကလှန်နိုင်မည့်သူဟူ၍ သိသည်နှင့် စိတ်တက်ကြွလာတတ်၏။ မလှန်နိုင်မည့်သူမှန်းသိက ပါးစပ်ပိတ် ကိုယ်ကိုနှိပ်၍ နေတတ်ကြသည်။ အမှန်မြင်က စက်ဆုပ်စရာတည်း။ မလွတ်လွတ်အောင် ရှောင်ရမည် (အားထုတ်ရမည်)။ နှုတ်လွန်က မဆုတ်သာ၍ ကာယပါနိုင်သည်။ သတိပြု။
လူတိုင်း၌ သံသရာကြွေးများ ပါလာ၍ ဘ၀ရသည်။ ထိုဘ၀၌ပင် ကောင်းမကောင်း တွေ့နေရမည်။ ဒါကို မကျေနပ်လျှင် ထိုထက်ဆိုးမည်မှတ် ဥပေက္ခာပြု။
လူမှန်သမျှ ကြိုကြားအနှောင့်အယှက်တွေ့ရခြင်းနှင့် မကောင်းကြွေးများသူမှာ တရစပ် အနှောင့်အယှက် တွေ့နေရမည်သာ ဖြစ်၏။ အကျဉ်းချုပ်မှတ် ချဲ့မြင်လေ။
အဲဒီစာကို အဖေရေးလိုက်တာက ကျွန်မက ကျွန်မရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုခုကို အဖေ့ဆီ စာရေးပြီး တိုင်တည်လိုက်မိပုံ ပေါ်ပါတယ်။ ကြာတော့လည်း မေ့ကုန်ပါပြီ။ အဖေ့စာကတော့ ပြဿနာတစ်ရပ်ရပ်နဲ့သာ ပတ်သက်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်လိုအချိန်အခါမှာမဆို စဉ်းစားတွေးတောလို့ ရနိုင်တဲ့ အခြေခံအကြောင်းအရာတွေ စုံနေအောင် ပါပါတယ်။
ဒေါသနဲ့ ယှဉ်လာရင် အပြစ်ပဲမြင်တတ်တယ်ဆိုတာလည်း ဟုတ်တာပါပဲ။ ဒေါသဖြစ်လာရင် မေတ္တာက ခန်းခြောက်သွားတတ်စမြဲကိုး။ အဲဒီတော့ ဘာပဲပြောပြော ဘာပဲလုပ်လုပ် မဟုတ်တာကိုပဲ အရင်တွေးတတ် ပါတယ်။ မဟုတ်တာကိုပဲ မြင်တတ်ပါတယ်။
အပြစ်မြင်တာ တင်တာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အခါမှာ အဖေပြောတာကတော့ မကြောက်ရတဲ့သူကိုသာ အပြစ်မြင်တတ် အပြစ်တင်တတ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ကို ကြောက်နေရရင် အပြစ်မြင်ရမှာတောင်မှ ကြောက်ကြတယ်ထင်ပါရဲ့။ အပြစ်တင်တယ်ဆိုတာကတော့ ပိုပြီး ပွင့်လင်းစွာ အပြစ်ကို ပြောရမှာကိုး။ အဲဒီလို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း အပြစ်ပြောရမယ့်အလုပ်ကိုတော့ မကြောက်ရမှပဲ လုပ်မိမှာပါပဲ။ ကြောက်တတ်ရင်တော့ လုပ်မိမယ် မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီနေရာမှာ ဆင်ခြင်စရာကောင်းတဲ့အချက်ကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်လိုက်ပါတယ်။ ဒေါသကို ရှေ့မှာထားပြီး မစဉ်းစားနဲ့။ စဉ်းစားရင် အပြစ်ဆိုတာကတော့ ပေါ်မှာပဲ။ ကိုယ်ကရော အပြစ်ဘယ်လောက် ကင်းလို့လဲ။ ဒေါသကို ဖွင့်ချတော့မယ်၊ သူတစ်ပါးအပေါ်မှာ အပြစ်ရှာတော့မယ်ဆိုရင်လည်း ဆင်ခြင် ကြည့်လိုက်ပါ။ ဒီလောက်တောင်မှ ဒေါသကို ဖွင့်ချချင်နေတယ်ဆိုရင် သူဟာ ကိုယ်က မကြောက်ရမယ့်သူ ဖြစ်နေလို့လား။ မကြောက်ရမယ့်သူကို မဲတာကရော ဘယ်လောက်များ မှန်ကန်လို့လဲ၊ ဘယ်လောက်များ တရားမျှတလို့လဲ။ အဲသလို တွေးပြီးတဲ့အခါမျာ အလျင်အမြန် မိမိစိတ်ကို ချုပ်ထိန်းနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ကြောက်ရမယ့်သူ မိမိကို ရက်စက်မယ့်သူနဲ့ ပတ်သက်တယ်ဆိုရင် အလိုလိုမျိုသိပ်တတ်တာကိုး။ အဲဒီလို မျိုသိပ်တာကတော့ ဘေးကင်းတာပေါ့လေ။ ဒါတောင်မှ စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် စဉ်းစားစရာတွေ ရှိနေပါတယ်။ အများနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အရေးကိစ္စများကို မျိုသိပ်ရမယ်လို့ဆိုရင် အများသက်သာဖို့အတွက်သာ ဖြစ်စေရပါမယ်။ ငါဘေးကင်းဖို့ မျိုသိပ်မယ်။ ပြောသင့်တာတောင်မှ ပြောမနေတော့ပါဘူး။ နစ်နာတာက ငါမှ မဟုတ်ဘဲလို့ စဉ်းစားရင်တော့ စဉ်းစားတဲ့ကိစ္စ မမှန်ကန်တော့ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒေါသကို ဖွင့်ချဖို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ပွင့်လင်းနိုင်ဖို့ သတ္တိရှိဖို့ကို စဉ်းစားမိလို့ပါ။
အဖေ့စာထဲက ကျေးဇူးရှင်ဆိုတဲ့အပိုဒ်ကို ကျော်လိုက်ရင်တွေ့ရတဲ့ စာပိုဒ်အဆုံးကတော့ လူ့သဘာဝကို ထင်းထင်းကြီး မြင်သာပါတယ်။ အဖေပြောသလိုပါပဲ။ စက်ဆုပ်စရာလည်း ကောင်းပါတယ်။
အဖေ့စာထဲက ကျေးဇူးရှင်ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရအဖွင့်ကလေးကတော့ ချစ်စရာပါပဲ။ ကိုယ့်တစ်အိမ်ချင်း ကွင်းပြင်မှာနေရင် မလုံခြုံဘူး။ အဲဒါကြောင့် အိမ်နီးချင်းဆိုရင်ပဲ ကျေးဇူးကတင်ရပြီ ဆိုတဲ့ အချက်က အလွန်သေးဖွဲတယ်ထင်ရပေမယ့် အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်နဲ့ ပတ်သက်တာကြောင့် အရေးတကယ်ကြီး ပါတယ်။
အဖေ့စာလိုစာမျိုးတွေ အများကြီးရှိမှာပါပဲ။ ကျွန်မကလည်း ဒီစာတစ်စောင်ကိုမှ ရွေးပြီး သိမ်းမိတာပါ။ ဘယ်နှခေါက်ပဲဖတ်ဖတ် လိုရင်းကိုတော့ သိနိုင်ပါတယ်။ ဝေမျှလိုတဲ့သဘောနဲ့ တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
( ဒေါက်တာမတင်ဝင်း ၏ “ဒါလေးကို ဖတ်ကြည့်ပါဦး” စာအုပ်မှ ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြပါသည် )
Posted by ကိုဉာဏ် Posted Time 11:58 AM0Comment(s) Link This
ပေါ်နွေလလျှင်၊ တောင်ကခြိမ့်မြူး၊ မင်းလွင်ဦှးနှင့်၊ ပျံ့ပျူးချုပ်ထိုင်း၊ မုန်တိုင်းဆင်လို၊ တိမ်ညိုမှိုင်းထပ်၊ ပြက်လျှပ်ပြကာ၊ စိမ်းဝါမိုးပန်း၊ ထွေထွေစွန်းက၊ ရေသွန်းသာကြည်၊ ပျော်ရမည်ကို မြရည်သက်မှတ်၊ ရောက်ခဲလတ်ဟု၊ ချစ်ထွတ်တင်သည်၊ ပြာစင်ရွှန်းလတ်၊ ဖြူဝန်းမွတ်လျှင်၊ ကြာညွတ်ဖယောင်း၊ နေရှိန်ပြောင်းသို့၊ ဆင့်လောင်းလွမ်းဝှန်၊ ရှိလိမ့်ဟန်ကို၊ တိမ်စွန်လေလျှင်၊ ဖူးရောက်ချင်သည်။ ။ ငှက်သွင်ပျံကြွမတတ်သော။
မြော်ချေကလျှင်၊ ကာလအလျောက်၊ ပိတောက်လျံခဲ၊ ရွှေရည်စွဲက၊ ပုလဲငုံသွယ်၊ အလှယ်လှယ်တိ၊ စံပယ်ဖြူမွှေး၊ စံကားသေးကို၊ မြတ်လေးစုံမက်၊ ကျွန်ုပ်လက်ဖြင့်၊ ရွေးလျက်ရွရွ၊ မဆင်ရတည့်၊ ကာလသို့အောင်၊ ရည်စောင်ပန်းမှန်၊ မမီလွန်ကဲ၊ ချိန်တန်သို့သည်၊ ပြန်မည်လေသာ၊ မရောက်လှာဟု၊ ကြံကာခွေ၍၊ နေလိမ့်မည်ကို၊ ရှိသည်မှုရန်၊ မင်းရေးဝန်ကြောင့်၊ လျှောက်ပန်စေ့မျှ၊ မချေရသော်၊ ပြိုက်ကျသွယ်ဖြည်း၊ နှင်းထက်သည်း၍၊ ၀မ်းနည်းလျက်ပင်၊ ပျောင်းလိမ့်ထင်သည်။ ။ ညက်စင်စံများ အထွတ်သော။
ဖျော်ဖြေမှလျှင်၊ ယုယသံချို၊ ပြေလိုစိမ့်သား၊ ကျူးပိုက်ဖြား၍၊ ချီသွားမူးမူး၊ ရှေ့ရက်ဦးက၊ မကျူးထင်ထင်၊ ကဆုန်တွင်ကို၊ ကျိုင်းစင်မြခဲ၊ စစ်ပွဲရန်နှည်၊ ပြန်လျှင်းမည်ဟု၊ နှုတ်ခြည်ပေါ်သာ၊ ဆိုလေရှာသော်၊ မလ္လာရနံ့၊ ထုံပျံ့ပန်းသတ်၊ ခြူးနတ်ဆင့်ကုံး၊ စိန်ပွင့်အုံးဝယ်၊ ပင့်ရုံးရွရွ၊ လက်သင်မ၍၊ သက်မျှငယ်ချစ်၊ ပျောင်းလိမ့်ဖြစ်ကို၊ စိစစ်မိမိ၊ သတိချုပ်ဆည်၊ ပြေမည်မျှဝေး၊ ချစ်ဝန်လေးခဲ့၊ ရေးရေးဖူးချင်၊ မယ်သို့လျင်သည်။ ။ ငှက်ရှင်လျှံမျှရဟတ်သော။
IN COMING SUMMER
NAT SHIN NAUNG(1578-1619)
In coming summer, thunder from the south,
Early vapors spread and clutch like storms,
Dark clouds are stacked, lightning glimmers,
Rainbow drops from the highest shower.
“At the libation festival, we should meet with joy,
But the emerald of my life is tardy.”
So saying, she, the height of my love,
The blue pure elegance, the fair bright smoothness,
Is limp likeawithered lotus or like wax
Which the sun’s vigor liquefies. To adore
The lineaments of her strong longing,
I would like to rise and fly in the winds of the sky,
But bird-like, I am powerless to soar.
The padauk flower of pearl and gold,
Pure-white jasmine and magnolia
Have appeared in their several seasons.
I would place them in her hair with my own hands,
But the seasons have passed. I can imagine her thinking
I have not returned at the appointed date.
How can I tell her that war duties keep me?
But she of the lovely complexion
Will let her tears fall heavier than thick mist.
“You hugged and caressed me, hoping to soothe me.
Withasweet voice, you said so casually,
When you set out, you’d be back in May, victorious.”
So saying, the one I loved as my life from youthful days,
Will lean back on the divan decorated
With floral designs and Malayan sandalwood.
Then, holding her hair from falling, she will languish.
Knowing this, the burden of love grows heavy,
And even while controlling my thoughts, I wish to rush to her like the wheeling disc of the sun.
( ဆရာဝင်းဖေ ၏ “မြကန်သာ” စာအုပ်မှ ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြပါသည် )
Posted by ကိုဉာဏ် Posted Time 11:52 AM5Comment(s) Link This